नायिका श्वेता खड्काको आज जन्मदिन, कति बर्षकि भइन ? – Life Nepali
नायिका श्वेता खड्काको आज जन्मदिन, कति बर्षकि भइन ?
काठमाडौं । नायिका श्वेता खड्काको आज ज’न्मदिन । १९८९ फेब्रुअरी ५ तारिखका दिन उनको ज’न्म का’भ्रेको प’नौतीमा भएको हो । यस आधारमा आज उनी ३२औं ज’न्मदिन म’नाउँदैछिन् । श्वे’ताले १२ वर्षअघि मो’डलिङ हुँ’दै फि’ल्मी क्या’रियर सुरु गरेकी हुन् । सन् २०१० मा रि’लिज भएको चलचित्र ‘क’हाँ भेटि’एला’ उनको डे’ब्यु चलचित्र हो । ए’उटै च’लचित्रबाट स्था’पित हुने थोरै नायिकामा श्वे’ता पनि पर्छिन् ।
त्य’सपछि उनले हाँसी दे’उन एक फेर, श्री’मान् श्रीमती, को’हिनूर र कान्छी चलचित्रमा अभिनय गरिन् । क’हाँ भेटिएला, को’हिनूर र का’न्छी उनले आफैंले निर्माण गरेको चलचित्र हो । कहाँ भेटिएला खेल्नेक्रममा उनको अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग प्रेम स’म्बन्ध ब’स्यो । त्यसपछि दुवैले आफ्नो प्रे’मलाई वि’वाहमा प’रिणत गरे ।
बिहेपछि श्रीकृष्ण र श्वेता ६ महिना पनि सँगै बस्न पाएनन् । सन् २०१४ मा क्यान्सरका कारण श्रीकृष्णको निधन भयो । श्रीकृष्णको नि’धनपछि दुई वर्ष नेपाली च’लचित्र उद्योगबाट अ’लग्गिएकी श्वेता’ फेरि अभि’नय र निर्माणमा ला’गिन् । आ’काश अ’धिकारीसँग मि’लेर का’न्छी च’लचित्र खे’लिन् । अहिले उनी सिन्धुपाल्चोकको मा’झीब’स्तीमा ए’कीकृत घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा लागेकी छन् ।
Previous अब धुलो र हिलो लागेको सवारी साधन काठमाडौं भित्रिन नपाउने”
Next घु’स्याहाले घुस फिर्ता गर्छु भन्यो भने छाड‌ने कि नछाड‌ने ?